सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहने टिप्स « TechPana | Digging into Tech
मंगलवार, असार ९, २०७७ १६:३०
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालले हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोडेको छ । तर कहिलेकाँही होशियारी नअपनाउँदा यीनै सञ्जालबाट हामी स्क्यामर तथा ह्याकरहरुको चंगुलमा फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर चिन्ता नलिनुहोस् । केही सुरक्षित कदम अपनानुहोस्, जसबाट तपाईंको सामाजिक सञ्जालको जीवनमा सन्तुलन छाउँनेछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्वीटरमा सुरक्षित रहन सधै निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् ।
१. आफ्ना अडिन्स निर्धारण गर्नुहोस्
२. पब्लिक वा प्राइभेट चयन गर्नुहोस्
३. स्टोरीलाई लकडाउन गर्नुहोस्
४. पोस्टलाई संरक्षण गर्नुहोस्
५. अनावश्यक व्यक्तिलाई ब्लक गर्नुहोस्
६. अन्य प्रयोगकर्तालाई म्युट गर्नुहोस्
ट्वीटरमा जानुहोस् । आफूले चाहेको व्यक्तिको प्रोफाइल खोल्नुहोस् । त्यहाँ रहेको थ्री डट मेनु खोल्नुहोस् र म्यूट बटन चयन गर्नुहोस् । यस्तै इन्स्टाग्राममा प्रोफाइल खोल्नुहोस् र फलोइङमा ट्याप गरेर म्यूट (स्टोरी वा पोस्ट वा दुवैमा) ट्याप गर्नुहोस् ।
७. रिप्लाई र कमेन्टको नियम याद राख्नुहोस्
८. अरुको पोस्टमा आफू ट्याग नहुने
९. आफ्नो लोकेसनमा ध्यान दिनुहोस्
१०. व्यक्तिगत जानकारीमा होशियार रहनुहोस्
११. लग ईन विवरण सुरक्षित राख्नुहोस्
१२. थर्ड पार्टी एपलाई डिसकनेक्ट गर्नुहोस्